9 in 10 African nations set to miss urgent COVID-19 vaccination goal | African Tourism Board News
Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny zon'olombelona • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Firenena afrikanina 9 amin'ny 10 no vonona hametraka tanjona vaksinin'ny COVID-19 maika
Firenena 54 any Afrika dia efa nanoratra aretina COVID-19 efa ho dimy tapitrisa hatramin'izao ary nitombo efa ho 20 isan-jato ny isan'ny olona - mihoatra ny 88 000 - tamin'ny herinandro nifarana tamin'ny 6 Jona.
Atao na maty amin'ny fizarana fatra ho an'i Afrika
Vaksinina 225 tapitrisa Dosis no ilaina maika ao amin'ny kaontinanta
Roa isanjato monja amin'ireo olona efa ho 1.3 miliara aty Afrika no nahazo fatra iray
Amin'ny fatra 32 tapitrisa, Afrika dia mitentina latsaky ny iray isan-jato amin'ny mihoatra ny 2.1 miliara fatra omena eran-tany. Roa isanjato monja amin'ireo olona efa ho 1.3 lavitr'ity kaontinanta ity no nahazo fatra iray, ary afrikanina 9.4 tapitrisa ihany no vita vaksiny feno.
'Ataovy na maty' noho ny fatra
"Mahavita na maty amin'ny fizarana fatra ho an'i Afrika izany," hoy i Dr Matshidiso Moeti, World Health Organization (OMS) Talem-paritra ho an'i Afrika.
Ny fampahatsiahivan'ny OMS fa ny vaksin 225 tapitrisa doka ilaina maika ao amin'ny kaontinanta dia tonga satria nitombo ny aretina coronavirus tao nandritra ny herinandro fahatelo.
Firenena 54 any Afrika dia efa nanoratra aretina COVID-19 efa ho dimy tapitrisa hatreto ary nitombo efa ho 20 isan-jato ny isan'izy ireo - nihoatra ny 88 000 - tamin'ny herinandro nifarana tamin'ny 6 Jona.
"Rehefa manakatona tranga dimy tapitrisa isika ary manonja ny onja fahatelo any Afrika, maro amin'ireo olona mora tohina indrindra no miatrika zava-doza amin'ny COVID-19", hoy ny fampitandremana nataon'i Dr Moeti.
“Voaporofo fa vaksinina hisorohana tranga sy fahafatesan'olona, ​​ka ny firenena afaka manao vaksiny COVID-19 dia maika.”
Araka ny fanavaozam-baovao farany nataon'ny WHO, ny valanaretina dia "miakatra hatrany amin'ny firenena afrikanina 10". Firenena efatra no nahita fiakarana 30 isan-jato tamin'ireo tranga tao anatin'ny fito andro lasa, raha oharina tamin'ny herinandro teo.
Ny ankamaroan'ny tranga vaovao dia tany Egypt, Africa South, Tunisia, Uganda ary Zambia ary ny antsasany dia tany amin'ny firenena atsimon'i Afrika.
Ny vaksinina dia nanjary "nanjary nihombo", hoy ny sampan-draharahan'ny fahasalamana mikambana, ary nilaza fa amin'ny tahan'ny fandefasana ankehitriny dia firenena afrikanina fito ihany no hahatratra ny tanjona amin'ny fanaovana tsimatimanota olona iray amin'ny olona 10 amin'ny volana septambra.